ट्रम्पले भारतको हावा प्रदूषित भनेपछि ट्रम्प र मोदीप्रति भारतीहरू आगो - || वर्णन मिडिया - संवाहक सूचना तथा समाचारको ||
ट्रम्पले भारतको हावा प्रदूषित भनेपछि ट्रम्प र मोदीप्रति भारतीहरू आगो
२०७७ कार्तिक ९, आईतवार १५:१५:००
नयाँदिल्ली- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो कुनै कमजोरी नहेरी वायु प्रदूषबाट मुक्त हुन चिन, भारत र रुसले उचित कदम नउठाएको आरोप लगाए । राष्ट्रपतिका लागि भएको अन्तिम प्रेसिडेन्सियल बहसका क्रममा ट्रम्पले भारतको हावा प्रदूषित रहेको बताउँदै पेरिस जलवायु सम्झौताबाट अमेरिका पछि हट्नुलाई सही कदम भएको पुष्टि गर्न खोजे । नास्विलेको बेलमोन्ट विश्वविद्यालयमा राष्ट्रपति पदको निर्वाचनको अन्तिम आधिकारिक बहस (प्रेसिडेन्सियल डिबेट) का क्रममा ट्रम्पले भने, 'चिनलाई हेर्नुस्, कति फोहोर छ । त्यस्तै रुस र भारतमा पनि धेरै प्रदूषण छ । त्यहाँको हावा अति प्रदूषित छ ।'
अमेरिकामा आगामी ३ नोभेम्बरमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदै छ । ट्रम्पको कथनपछि भारतीयको क्रोध सतहमा आएको छ । उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा तथ्यांकमार्फत ट्रम्पलाई मात्र ऐना देखाएका छैनन्, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई पनि निसाना लगाउँदै यसको प्रत्युत्तर मागेका छन् ।
खासमा अमेरिकाको अन्तिम बहसमा राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रम्पले भारतको वायु प्रदूषणलाई लिएर भारतविरुद्ध बोलेपछि लगत्तै उनीहरूले ट्वीटरमा आगो ओकल्न थालेका हुन् । भारतको हावाका विषयमा ट्रम्पले बोलेको प्रति कांग्रेस नेता कपिल सिब्बलले ट्रम्पदेखि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीमाथि पनि खनिँदै लेखेका छन्, ‘हाउडी मोदीको परिणाम अब देखिँदै छ ।’ उनले ट्वीटमा ट्रम्पले पहिले भारतमा कोरोनाका कारण भएको मृत्युबारे सवाल उठाए, अब ट्रम्पले भारतले हावामा प्रदूषण पठाउँदै छ भन्न थालेको उल्लेख गरेका छन् । ट्रम्पले भारतलाई ट्यारिफ किङ भन्नु 'हाउडी मोदी' को परिणाम हो ।
त्यसै मेरोमा शिवसेनाका राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदीले ट्वीट गरे, ‘ट्रम्पको टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण छ । जलवायु परिवर्तनका विरुद्धको लड़ाइँमा भारतले प्रशस्त प्रयास गरेको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी लक्ष्य प्राप्तिका लागि भारत प्रतिबद्ध छ । अमेरिकीहरूको इच्छा विपरीत अमेरिका यसबाट पछि हटेको छ ।’
ट्वीटरमा अथर अतीश तासिरले पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि ट्रम्पको भनाइ सुनेको हुनुपर्छ लेखेका छन् । केही ट्वीटर प्रयोगकर्ताले यसै वर्ष फ्रेबुअरीमा सम्पन्न कार्यक्रम हाउडी मोदीबारे टिप्पणी गर्दै कटाक्ष गरेका छन् । कतिपयलाई यसरी ट्रम्पले भनेको धेरैलाई राम्रो लागेन ।
कांग्रेस कार्यकर्ता श्रीवत्साले पनि ट्वीट गरे, ‘मोदीले अहमदाबादमा नमस्ते ट्रम्प र्‍यालीमा ३.७ करोड भारु खर्च गरे । अहिले भारतको हावा प्रदूषित भन्दै छन्, मोदीसँग उत्तर छ कि ? मोदीले आफ्ना मित्रविरुद्ध एक शब्द निकाल्लान् ।’
भारतका सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश मार्कण्डेय काटजूले भने, ‘ट्रम्पले भारत फोहोर छ भने, के उनले झुटो बोले ? हरेक सहरका सबै ठाउँमा फोहोरका डंगुर छन्, खाद्य पदार्थ, पानी, नदीहरू र वायुमा प्रदूषण छ । स्मरण रहोस्, चिन विश्वकै बढी कार्बन उत्सर्जक देश हो । यसपछि दोस्रोमा अमेरिका अनि भारत र युरोपेली संघ क्रमश: आउँछन् । डोनाल्ड ट्रम्पको यो भनाइ यस्तो समयमा आएको छ, जब नयाँदिल्लीमा वायुको गुणस्तर सूचकांक (एक्युआई) 'अत्यन्त कमजोर तह' मा पुगेको छ ।’ (लाइभ हिन्दुस्तान)